Olbia — sezulu ngenyanga, lokushisa lamanzi
World Resorts Amazwe Italy Olbia
Isilinganiso esiphezulu lokushisa nsuku zonke — 29.8°C August. Isilinganiso esiphezulu lokushisa ebusuku — 21.7°C August. Isilinganiso esincane lokushisa nsuku zonke — 12.5°C February. Isilinganiso esincane lokushisa ebusuku — 7.4°C February.
Isilinganiso lokushisa esiphezulu of the amanzi — 25.7°C fixed August. Isilinganiso lokushisa okungenani amanzi — 13.4°C fixed February.
Kwezulu Maximum — 56.8 mm Lalotshwa November. Kwezulu Minimum — 8.6 mm Lalotshwa July.